भिडियोमा वर्षा - मनोरञ्जन - नेपाल
म्युजिक भिडियोमा ख्याति कमाएपछि नाईं नभन्नु ल ४ बाट फिल्ममा फड्को मारिन्, वर्षा राउतले । यसबीच उनी अभिनीत छक्का-पञ्जा, छक्का-पञ्जा २, जात्रालगायतका फिल्म हिट भए । उनलाई कामको खास अभाव भएन । तर गत वर्ष लगातार दुई फिल्म फ्लप भए, चौका दाउ र गोपी । न उनको अभिनयकै तारिफ भयो । यसपछि भने नयाँ फिल्ममा अनुबन्ध भएकी छैनन् । त्यसअगावै जात्रै-जात्रा र दाल भात तरकारीको सुटिङ सकेकी थिइन् । बरु फुर्सद समय अहिले धमाधम म्युजिक भिडियो खेलिरहेकी छन् । एक-दुई दिनमै सुटिङ सकिने, पारिश्रमिक पनि आकर्षक हुने । अरु के चाहियो ? तर भिडियोमै मस्त भइराख्दा फिल्म सुक्खा लाग्ने त होइन ? उसै पनि साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह, स्वस्तिमा खड्का, आँचल शर्माहरुको बोलवाला बढ्दै छ ।
प्रकाशित: वैशाख ८, २०७६
फरक स्वादका नाटक
एक रंगकर्मीको साबिती
सार्थक सिक्वेल (फिल्म समीक्षा : जात्रै जात्रा)
मिस वर्ल्ड नेपाल अनुष्का
पुरानै पकवान (फिल्म समीक्षा : स्टुडेन्ट अफ द इयर २ )